जेफ्री एपस्टाइनले आफ्नो सेलमा आत्महत्या गरे (अपडेट): मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	11 अगस्ट 2019 मा	• 8 टिप्पणिहरु
भनिन्छ जेफ्री एपस्टेनले आफ्नो रात राति 6: 30 पूर्वी मानक समयमा आत्महत्या गरे। त्यो आत्महत्या अवश्य पनि शicious्कास्पद छ, किनकि यो स्पष्ट छ कि आजकल सेलमा आत्महत्या गर्न सजिलो छैन र एपस्टेन आत्महत्याको निरीक्षणमा हुने थियो। कारागार कार्यालयको नीति अनुसार आत्महत्या पर्यवेक्षणमा रहेका बन्दीहरुलाई "प्रत्यक्ष, निरन्तर अवलोकन" अन्तर्गत राख्नु पर्दछ जसले "कैदीलाई सधैँ अबाधित दृष्टिकोणको अनुमती दिन्छ।" त्यहाँ अफवाहहरू पनि छन् क्यामेरा प्रणाली आत्महत्या को समयमा काम गरेको थिएन।
यो स्पष्ट छ कि यस समय हामी केहि वा कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनौं र सरकारहरू र मिडियाले उनीहरूले चाहेका सबै उत्पादन गर्न सक्दछन्। एपस्टेन सफा हुन सक्छ, ऊ ककटेलमा आरामसँग बस्न सक्छ, सम्पूर्ण एपस्टाइन कहानी ए देखि Z सम्म अर्को खरायो प्वाल हुन सक्छ।व्याकुल सिद्धान्त) हुन्; हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई के थाहा छ कि कुनै पनि छवि वा आवाज जुन हामी कहिँ पनि देख्न सक्दछौं भरोसा गर्न सकिदैन। यो सबै सफ्टवेयर, ग्रेनस्क्रिन, डीप फ्याक्स र अन्य मार्फत उत्पादन गर्न सकिन्छ (हेर्नुहोस् यहाँ त्यो कति सरल छ)। यो अब 'हेर्ने विश्वास गर्दैछ' भन्ने प्रश्न होइन, किनकि अब हामी जान्दछौं कि तपाई साधारण घर-बगैचा र भान्साको पीसीको साथ डीप फ्याक्स फोटो र भिडियोहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। सबै कुरा केवल प्रश्नको बारेमा हो: हामी सरकार र मिडियालाई हाम्रो ध्यानमा ल्याउने कुरामा विश्वास गर्न सक्छौं। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ अधिक से अधिक व्यक्तिहरू छन् जुन उत्तर "होईन" हो भनेर बुझेछन्। हामी केवल रेडियो र टिभी खोल्न जारी राख्छौं र हामी ती अखबारहरू पढ्न जारी राख्छौं, किनकि यो रिटायर भएकोमा धेरै राम्रो छ। हामी उपभोगको आदी छौं र त्यसपछि हामीलाई झूटो बनाइयो भने फरक पर्दैन।
अवश्य पनि हामी अनलाइन छलफल प्राप्त गर्न लागिरहेका छौं कि एपस्टेनको हत्या "गहिराइसम्म" वा मोसादद्वारा गरिएको हुन सक्छ र कुन विकल्पमा हामी अझ बढी देख्दछौं। यो पनि हुन सक्छ कि सम्पूर्ण कथा 'पेडोफिलिया' को अवधारणा जनतामा (र बारम्बार) रेटिनामामा प्राप्त गर्नका लागि कताई हो। In यो लेख मँ बताउँछु कि कसरी आउँदैछ नयाँ विश्व अर्डर इंद्रधनुको प्रचारसँग सबै गर्न छ। हामी यस्तो संसारमा काम गर्दैछौं जहाँ विषमलैंगिक बाहेक अन्य प्रकारका कामुकता नयाँ मापदण्डमा उचालिनेछ। भ्लादिमीर लेनिनले भने: "मलाई मात्र 1 जेनेरेशन दिनुहोस् र म सम्पूर्ण विश्व परिवर्तन गर्छु।" हामीले ठ्याक्कै त्यस्तै महसुस गर्छौं जुन हाम्रो आँखाअगाडि प्रकट हुन्छ। जोरीस डिमिंक हाइप, जिम्मी साभिले घोटाला र अब एपस्टाइन कहानीले हामीलाई पुरुषहरू बच्चाहरूसँग यौन सम्बन्ध राख्ने कथित प्रवृत्तिको शिकार हुनुपर्‍यो। भनिन्छ खोजी गर्नुहोस् छाप दिनुहोस् कि अब दस जना मध्ये एक जनामा ​​त्यो प्रवृत्ति छ। नियमित रूपमा यस प्रकारको 'पेडोफाइलहरू' अगाडि पृष्ठहरूमा ठूलो मात्रामा राखेर, "सोच्नुहोस् को प्रभाव होइन कालो बिरालालाई ”। तपाईं कालो बिरालोको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको अवचेतन दिमाग 'पेडोफिलिया' को अवधारणाको साथ निरन्तर सम्बन्धमा अभ्यस्त हुनुपर्दछ।
साथै सोशल मिडियामा र वैकल्पिक मिडियामा छलफलले तपाईंलाई अर्को एलिसमा वन्डरल्याण्ड खरायोको प्वालमा आकर्षण गर्दछ, केही कुरा नभई बारम्बार पिडोफिलियाको विषयसँग अचेतन सम्बन्ध राख्छ। यदि यो तपाइँको रेटिनामा प्राय: पर्याप्त हुन्छ भने, तपाइँ यसको लागी आउनुहुनेछ र विषय तपाइँको दीर्घकालीन स्मृति (तपाइँको डीएनए) मा जलाइनेछ। म कसरी काम गर्दछु यो लेख व्याख्या चाहे यो तथाकथित "डीपस्टेट" हो जसले एप्पस्टाइनलाई मारे, चाहे यो मोसाद हो वा सायद आफै ट्रम्प: यी सबै प्रश्नहरू हुन् जसले पूरै कहानी कहानी बाहेक अरू केही हो भन्ने सम्भावनालाई वेवास्ता गर्छन्। के तपाई वास्तवमै सोच्नुहुन्छ कि सरकार र मिडियाले उनीहरूको अरबौं बजेटको साथ वास्तवमा जनतालाई पूर्ण रूपमा भ्रममा पार्न सकेका छैनन् कता कथाहरू छन् जसले अझ बढी खरायो गुफामा अझ बढी खोजहरू निम्त्याउँछ; यस बीचमा अचेतन प्रोग्रामिंगको परिणाम (मुख्य लक्ष्य) को साथ?
स्रोत लिङ्क सूची: rt.com, ad.nl
ट्याग: cel, एपस्टीन, विशेष, जेफरी, आत्महत्या
11 अगस्ट 2019 मा 14: 57
यसैले म केवल जिल पेडो ईपीको बारेमा कुरा गरिरहेछु, अन्यथा सबै मोसाड अलार्म बज्नेछ र तपाईंले यो जान्नु अघि SD तपाईंको ढोकामा हुनेछ!
11 अगस्ट 2019 मा 17: 53
पेडोफिलिया बस्तीको साथसाथै, एपस्टाइन केसले वैकल्पिक मिडियालाई व्यस्त राख्नु र तिनीहरूलाई गलत मार्गमा पार्नु पनि हो। विशेष गरी क्यू-अनुयायीहरूको लागि यो पक्कै पनि अद्भुत लाइसोरिस होल्डर हो।
त्यहाँ अब यो पूरै कथा संग केहि गलत छैन र यो वास्तवमा बुझ्न नसकिने छ कि उनीहरु यसबाट टाढा हुन्छन्। केवल यस लेखको शीर्षमा फोटो लिनुहोस्। त्यहाँ मैले फायर डिपार्टमेन्ट न्यु योर्क (FDNY) बाट आएको कोही मान्छे फायर डिपार्टमेन्टको गेराजमा घुम्दै गरेको देखेको छु, एउटा स्ट्रेचरको साथ र टाउकोमा टाउको भएको मान्छे एकदम धेरै ठूलो छ। यसमा एफडीएनवाईको साथ धेरै स्ट्रेचरहरू छन्, जबकि उसलाई निजी क्लिनिकमा लगियो। तपाईं यसको साथ चिन्ह पनि देख्न सक्नुहुनेछ: कृपया ईन्जिनहरू बन्द गर्नुहोस्, जुन फायर ब्रिगेडमा सामान्य छ। एम्बुलेन्सहरूले ईन्जिनहरू राम्रोसँग चल्नु पर्छ।
मलाई थाहा छ कि उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ।
11 अगस्ट 2019 मा 18: 04
र जेलमा पक्कै पनि 'क्यामेरा समस्याहरू' थिए, त्यसैले दुर्भाग्य बदाम बटर: उनको मृत्युको प्रमाण छैन। रूसीहरूले फेरि दोष प्राप्त गर्नेछन् ...
12 अगस्ट 2019 मा 10: 37
यो देख्न बाँकी छ कि एपस्टेन मरेको छ कि छैन। ऊ मरेको छ भनी बहाना गर्न विशेष माध्यमबाट बेहोस भएको हुन सक्छ। जेलबाट बाहिर निकाल्ने आदर्श तरिका। अस्पताल वा मोर्चरीमा, स्रोतहरू काम गरेर जीवनमा आउँदछन्। ऊ अस्पताल वा शवगृहबाट बाहिर तस्करीमा छ र लामो समयदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका छोडेको छ।
कुन देशमा यो हुनेछ, 10 पटक अनुमान गर्नुहोस्।
ठिक छ यदि तिनीहरूले यसलाई चलाख स्मार्ट बनाएको छ नक्कली दाहसंस्कार र तितरबितर 'खरानी' हो, यो पछिल्लो परिदृश्य केवल ईन्टेमेटहरू र सुरक्षा सेवाहरू मार्फत सम्भव छ। ठिक छ, केहि बेरमा उनीहरूले फिल्महरू बनाउँनेछन् र यस बारे पुस्तकहरू लेख्नेछन्। र होइन, तपाइँले गर्न सक्नुहुनेछ र कहिले पनि 'सरकार' मा विश्वास गर्नुहुन्न।
12 अगस्ट 2019 मा 11: 18
सबै आवश्यक छैन ... तपाईं केवल सबै गडबड बिना एक कहानी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
12 अगस्ट 2019 मा 13: 33
12 अगस्ट 2019 मा 20: 31
वा ऊ अन्य इरादाका साथ अस्पताल बाहिर तस्करी गरिएको थियो ………… .. जस्तो अन्य प्रश्नको साथ अरु प्रश्नहरु जस्तै ??? एपस्टेन एक पटक तथाकथित कन्ट्रोल फाइलहरू बनाएर सम्पत्ति थिए, तपाईंलाई ज्याक एब्रोमिफ जस्तो थाहा छ। यद्यपि मार्टिनले निरन्तर भनेको छ, अहिलेको निगरानी र प्रविधि र डाटाबेसको साथ अब यो आवश्यक पर्दैन, त्यसैले अब उसले उत्तरदायित्व बनाउँछ। त्यसोभए पहिले बर्डीलाई अरू जहाँ कहीँ कन्ट्रोल फाईलहरू छन् गाऊन् भनेर अति नै सजिलो छ। यद्यपि, मरेका वा यहाँ बाँचेको मतलब यो होइन कि उसको अपराधहरू प्रकाशमा आउनैपर्नेछ र उसलाई र उसका साथीहरूलाई सजाय दिइनेछ
12 अगस्ट 2019 मा 22: 35
फेरि: कथा भनेको कहानी मात्र हो।
त्यो सजिलैसँग (नक्कली) छविहरूको साथ समर्थित हुन सक्छ।
हलिउडले के गर्न सक्छ मिडियाले गर्न सक्छन् (एक पल मा)
« पदोन्नति: मार्टिन Vrijland संग छुट्टी मा नि: शुल्क
किन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ आदर्श हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ »
कुल भ्रमण: 4.118.978